Yakabatanidzwa nekukurumidza-kuburitsa rusvingo pani
Mepu mbiri dzekuongorora dzichangoburwa dzinoratidza kuti indasitiri yemasvingo yakabatanidzwa yakapinda munguva yekukura nekukurumidza nekuda kwenzvimbo nyowani yemitengo inosimudzira, kuda kudzoreredza, kugona kwakanyanya uye zvimwe zvinhu. Parizvino, iwo musika mugove wemubatanidzwa madziro wasvika 40%, uye kuchine anenge 30% o ...
Kugovera-kudiwa uye mutambo wemutengo, PVC inogona kuchinja zvakanyanya
Padivi rekupa, sekureva kwaZhuo Chuang Ruzivo, kubva muna Chivabvu, ingangoita hafu yemagetsi ekugadzira yakagadziriswa gore rino. Nekudaro, kutonga kubva kune yazvino yakaburitswa yekugadzirisa masimba, huwandu hwemakambani akazivisa chirongwa chekuchengetedza muna Chikumi ishoma. Iyo ...
Yakagadzirwazve PVC: Muhafu yekutanga yegore, yakasimba kusangana nemusika usingawanzo. Muhafu yepiri yegore, kushingairira kunogona kudzokera mukugadzikana
Muhafu yekutanga yegore, musika wakadzokorodzwa wePV musika wakaunza musika musingawanzo wemutengesi. Kudiwa kwaive kwakasimba, uye kudiwa kwePVC yakadzokororwa kwakaramba kuchikwira, izvo zvakashanduka kubva kune yakaderera chimiro chekare. Muhafu yepiri yegore, nekureruka kwekugovera uye d ...
Gore rapfuura, China yekugadzira kwePVC yekuChina yakasvika matani emamiriyoni makumi maviri nemakumi manomwe nematanhatu, ichitanga pasi
China ndiye mutengi mukuru uye mugadziri wemakemikari zvigadzirwa. Mune ino indasitiri, nyika yangu iri kuramba ichipaza kuburikidza nehunyanzvi hwekukanganisa uye yakawana mhedzisiro yakawanda. Izvozvi, indasitiri yemakemikari zvakare yakagamuchira nhau dzakanaka. Sekureva kweshumo razvino kubva kune vezvenhau neMuvhuro ...
Ndeapi maitiro ePVC yekunze madziro akarembera mapaneru?
Mazuva ano, kune akasiyana siyana ekuvandudza emba zvekuvakisa pamusika, pakati payo pvc madziro emadziro anogamuchirwa neruzhinji serudzi rutsva rwezvinhu. , Zvimwe vanhu vazhinji havazive zvakawanda nezve izvi zvinhu. Pvc wallboard iri nyore kushandisa? Nhasi, mupepeti achaunza ...
Kunze kwemadziro kushongedza kwakarembera bhodhi
Inonyanya kushandiswa kune yekushongedza pamusoro pechikamu chemakirabhu, nezvimwewo, uye inogona kushandiswa mukati mekushongedza senge pombi nemidziyo. Mutengo wezvinhu wakachipa zvakachipa. Inoshandiswa kushongedza kwekunze inonziwo kushongedza kwekuvaka, mapaipi, zvishandiso nemimwe michina. Nekuti iyo q ...
Matangi anorema ekuchengetera mafuta akaputika uye akabatira moto, uye makambani aive pedyo akamisa kugadzirwa
Na15: 10 pana Chivabvu 31, 2021, paive nemoto munzvimbo yetangi yePeak Rui Petrochemical Co., Ltd. muNandagang Management Zone yeCangzhou City. Nandagang Industrial Park Management Committee yakabva yatanga hurongwa hwekukurumidzira kuronga kuchengetedzwa kwevanhu, kuchengetedza moto, kuchengetedza super ...
Calcium carbide musika inoramba ichivandudza, mitengo yePVC inochengetedza inokwira kumusoro
Parizvino, zvese zviri zviviri PVC pachayo uye nepamusoro penyurusi calcium carbide iri mune yakaoma kugovera. Kutarisira kwa2022 uye 2023, nekuda kweiyo PVC indasitiri yega simba rekushandisa simba uye matambudziko ekurapa klorini, zvinotarisirwa kuti hakusi kuwanda kwakawanda kuchaiswa mu pr ...
PVC yakasimba muImagetsi uye zvigadzirwa zvemakemikari
Parizvino, PVC ine simba rakasimba musimba uye zvigadzirwa zvemakemikari, uye inogumirwa nekukanganiswa kwemafuta asina kuchena nezvimwe zvinhu zvakawanda. Mushure mekugadziriswa kushoma mukutarisa kwemusika, kuchine kukwira kwekufamba. Zvinokurudzirwa kuti varimi vatonge nzvimbo dzavo uye vatenge zvakanyanya pane d ...
PVC yeramangwana mitengo yakwirazve kubva pamitengo yakaderera, uye technical callbacks inoda kudzivirirwa munguva pfupi
Mitengo yePVC yemberi yakwira kubva pamitengo yakaderera, uye technical callbacks inoda kudzivirirwa munguva pfupi: Muvhuro, iyo PVC V2105 kondirakiti rinorema vhoriyamu kurerutsa chinzvimbo chayo, uye ramangwana mutengo wakakwira. Mutengo wekuvhara wezuva was 8340 yuan, yaive -145 yuan ichienzaniswa ne ...
Kuongorora kwekukwira uye kudonha kwemusika wepurasitiki
ne admin pane 21-02-21
Kuongorora kwekukwira uye kudonha kwemusika wepurasitiki vhiki rega rega: Mushure meZororo reMutambo weChirimo, musika wepurasitiki wakasimuka zvine simba Muvhiki rino, musika wepurasitiki wakakwira zvakanyanya, zvigadzirwa zvemunhu zvichikwira zvinopfuura gumi%. Pakati 8 mapurasitiki zvigadzirwa kuongororwa neZhongyu Infor ...
Kuongororwa kwemusika wePV wekutengesa kunze muhafu yekutanga ye2020
Kuongororwa kwemusika wePVC wekutengesa kunze muhafu yekutanga yegore ra2020 Muhafu yekutanga yegore, musika wekunze wePvv wekutengesa kunze wakakanganiswa nezvinhu zvakasiyana senge zvipuka zvekumba uye zvekunze, akakwira nekudzika emakambani ekushanda, mitengo yezvinhu zvakasvibirira, zvigadzirwa uye ...